Merkel oo la kulmeysa Putin si ay uga wada xaajoodaan xasaradaha Suuriya iyo Ukraine | Dhamays Media Group
Merkel oo la kulmeysa Putin si ay uga wada xaajoodaan xasaradaha Suuriya iyo Ukraine
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa inay Ruushka kula kulanto Vladimir Putin, waana kulankoodii u horeeyay tan iyo sanadkii 2015kii.
Kulanka oo ka dhici doona halka uu Putin ka deggan yahay Sochi ayaa ku soo aadaya xilli xiriirka labada dal uu ku xumaaday dagaalka Suuriya ka socda iyo qabsashada gobolka Crimea.
Waxaa lagu wadaa inay kulankooda uga wada hadlaan labada arrin, balse inay xal ka gaari doonaan lama oga.
Putin ayaa kaddib Arbacada la kulmi doona hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Image captionPutin iyo Erdogan ayaa Arbacada ballansan
Xiriirka u dhaxeeya Ruushka iyo Jarmalka ayaa ka sii darayay tan iyo intii uu Ruushku dhul-ballaarsiga ku sameeyay gayiga Crimea sanadkii 2014kii, iyadoo Jarmalkuna uu dabada ka riixayay cunaqabaneyntii uu Midowga Yurub arrintaas kaga jawaabay.
Labada dal oo ka tirsan dalalka adduunka ugu awoodda badan, ayaa dhawaan isugu yimid shirar caalami ah.
Balse kulankan oo ujeeddadiisa rasmiga ah ay tahay ka wada xaajoodka shirka hogaammiyeyaasha caalamka ee ee G20 ee lagu qaban doono magaalada Hamburg bisha lixaad – waa safarkii ugu horreeyay ee Merkel ay ku tagto Ruushka muddo labo sano ah.
Merkel ayaa ka dooneysa Ruushka inuu xal u helo soo afjaridda dagaalka Ukraine isla markaana uu ka taliyo nabad ku soo dabaalidda Suuriya.
Maraykanka oo difaacay weerarkii ay dadka badan ku dhinteen ee Yemen
Faransiiska: Yurub uma baahna talooyinka Trump
Merkel: Argagaxisada ‘khatar weyn’ ayey nagu yihiin
Merkel oo cambaareysay go'aanka Trump
Balse madaxweyne Putin ayaa si taas la mid ah doonaya taageerada Merkel ee ku aaddan qaadidda cunaqabeynta Midowga Yurub.
Putin ayaa sidoo kale doonaya inuu ogaado fekerkeeda ku aaddan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ay dhawaan la kulantay.
Previous: Daawo Badhasab Awdal Shiine Oo Eedeyay Gudomiyha Komishanka Ee Gobolka Awdal
Next: Hindiya oo Pakistan ku eedaysay in ay askar ka layaayeen suuradana ka badaleen